सुपथ मूल्य पसलको सान्दर्भिकता | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / सुपथ मूल्य पसलको सान्दर्भिकता
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय September 12, 2019	0 38 Views
तीज, पञ्चमीसँगै विभिन्न जात्रापर्वहरुको मौसम सकिएपछि नेपालीहरुको घर आँगनमा दशैं, तिहार, छठजस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्वको रमझम शुरु हुन्छ। असोज लागेपछि सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंले नेपालीहरुलाई छपक्क छोइहाल्छ। यिनै ठूला चाडपर्वको अवसरमा खाद्यान्न, लत्ताकपडादेखि सूनचाँदी, सवारीसाधनसम्म ठूलो परिमाणमा खरिद बिक्री हुने गर्दछ। हुनेखानेहरुले आफ्नो हैसियतअनुसार महंगा वस्तुहरु खरिद गर्ने गर्दछन् । तर आमसर्वसाधारण वा भनौं न्यून आय भएका नागरिकहरुलाई पनि केही न केही खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ। सुपथ मूल्य पसलहरुको सान्दर्भिकता पनि यस्तै वर्गका निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु मार्फत थोरै भए पनि राहत दिने उद्देश्यका साथ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। दाङमा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सस्तो पसल सञ्चालन गर्दैछ। जसअनुसार उपभोक्ताहरुले प्रति किलो ५–६ रुपैयाँ कम मूल्यमा चिनी खरिद गर्न पाउनेछन्। यसैगरी नुनमा पनि छुट दिइने भएको छ। चाडपर्वमा धेरै वस्तुहरुको उपभोग एवं खरिद अत्यधिकरुपमा हुने भएकोले सुपथ मूल्य पसलहरु शहर बजारमा मात्र केन्द्रित नभएर पालिका एवं वडा तहमा विस्तारित गर्न जरुरी हुन्छ। यसो गर्न सकियो भने मात्रै सर्वसाधारण नागरिकहरुले राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
ठूलो परिमाणमा वस्तु क्रय बिक्रय हुँदा व्यवसायीहरुले कम मुनाफा लिएर पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो परिस्थितिमा दुई–चार प्रतिशत नै किन नहोस्, छुट दिएर ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यो भनेको व्यावसायिक नैतिकता र इमानदारिताभित्र पर्ने विषय पनि हो। यसमा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ, व्यावसायिक संघसंस्था र व्यवसायीहरुले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। तर त्यसतर्फ यथोचित ध्यान दिएको पाइन्न। यो परिस्थितिमा उपभोक्ताहरुको बजारप्रति विश्वास कम रहन्छ। यसले स्थानीय बजारप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम गर्छ। यसमा व्यावसायिक संघसंस्था र व्यवसायीहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ।
चाडपर्वको मौसमसँगै सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकहरुको भीड लाग्न शुरु भइसकेको छ। नेपाली बजार सुनसान बन्ने र सीमापारिको बजार गुल्जार हुने परिस्थिति किन आइरहेको छ ? यसमा सम्बद्ध सबैपक्ष गम्भीर बन्न जरुरी छ। यसका धेरै कारण होलान्, एउटा प्रमुख कारण भनेको नेपाली व्यवसायीहरुले उपभोक्ताहरुको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको अवस्था हो। उपभोक्ता एवं ग्राहकहरुको मन जित्नका लागि निजी क्षेत्रकै पहलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २–४ प्रतिशत सहुलियत दिंदा व्यापार व्यवसाय डुब्ने परिस्थिति आउँदैन भन्ने कुरामा व्यवसायीहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यो परिस्थितिमा सीमापारि गएर सामान खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान सकिनेछ।
चाडपर्वको मुखमा मूल्यबृद्धि गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको गलत प्रवृत्तिका कारण व्यापार व्यवसायमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। अहिले भर्खरै दूध, मासुलगायतका उपभोग्य वस्तुमा अन्धाधुन्द मूल्य बृद्धि गर्ने काम भएको छ। नैतिकता नभएको कुनै पनि व्यवसायलाई उपभोक्ताहरुले विश्वास गर्दैनन्। त्यसखालको विश्वास आर्जन गर्नका लागि कम मुनाफा लिएर राम्रो सेवा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। चाडपर्वको अवसरमा गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तुहरु बेचबिखन भइरहेको पाइन्छ। यसमा सरकारले अनुगमनको पाटोलाई सक्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्र दुबै इमानदार बन्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। ा
Previous: डोरी तान्ने खेल र मान्छेको विकास
Next: अव्यवस्थित तारले कुरुप बन्दै सदरमुकाम
किसानको खेतबारीसम्म कहिले पुग्छ सरकार ?
सर्वोच्चको फैसलाले ल्याएको तरङ
विकास योजना समयमै अघि बढाउन आवश्यक